Tonga ny OxygenOS 11 namboarina hampiasa tanana iray amin'ny finday | Androidsis
Telefaona lava be dia be noho ny endrika 18: 9 ary izany dia mitarika antsika hialoha ny sasany amin'ireo fandinihana nataony OnePlus amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny OxygenOS 11 ho an'ny fikirakirana tsara kokoa amin'ny tanana iray avy amin'ny finday.
Ary ny marina dia ny interface of ny telefaona iray dia tsy maintsy mizatra amin'ny fomba fifandraisana vaovao, ary izany dia mitarika antsika hampiasa tanana iray ihany mba hampiononana bebe kokoa. Noho izany, manana UI iray miha mifanaraka amin'ny fananana ny "ambany" rehetra isika; mila jerentsika fotsiny hoe ahoana Nanavao tanteraka ny browser-ny ny Firefox hitondra ny saha ho an'ny URL mankany amin'io faritra io.
1 Izany no nanatsarana ny OxygenOS 11 ho an'ny fampiasana tanana iray
2 Fiovana natao tamin'ny interface
Izany no nanatsarana ny OxygenOS 11 ho an'ny fampiasana tanana iray
Tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo OnePlus dia namoaka ny beta an'ny Android farany ho an'ny mpampiasa OnePlus 8. Ora vitsy lasa izay dia naneho hevitra momba ny sasany amin'ireo fandinihana natao izy mba hamadika ny OxygenOS 11 ho lasa fomban-tany tsara kokoa noho ny fiteny famolavolana vaovao.
Namboarina mazava ho azy, amin'izay fifehezana izay ataontsika ankehitriny amin'ny alàlan'ny tanana iray ny telefaona ary ny fampiasana ny ankihibe ho torolàlana ahazoana eto. any akaikin'ny fanitarana ny finday; iray izay mihalava lava ary lafo kokoa ny mahatratra ny farany, noho izany dia mila manohana ny tenantsika amin'ny tanana hafa isika hahazoana fidirana haingana.
Gary C., Product Manager ao amin'ny OnePlus, dia manazava ny fomba fandinihan'ny OnePlus ny angon-drakitra mba hamolavolana rafitra iray izay ahazoana aina kokoa amin'ny fampiasana tanana iray. Anisan'ny sasany amin'ireo angon-drakitra voalohany dia hita fa ny 65% ​​amin'ireo mpampiasa dia maniry lohateny kely kokoa, raha 80% kosa dia atsipy bebe kokoa amin'ireo lohateny misy dikanteny.
Miorina amin'ity data ity, ny OnePlus dia nanamboatra hierarchy iray izay afaka mahita tsara ireo faritra voasintona izay anehoana fa mora, antonony na sarotra ny manatratra azy ireo. Izany hoe, mety ho lany amin'ny rantsantan-tongotrao ny hahatratra ny ampahany amin'ny efijery alohan'ny hampiasana ny tanana ilany hahazoana fidirana haingana.
Fiovana natao tamin'ny interface
Vokatr'izany, OxygenOS 11 afindra akaiky kokoa amin'ireo faritra ireo ny fanaraha-maso izay ahafahantsika manatratra ny rantsantanantsika lehibe nefa tsy mila mamelatra azy loatra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka izao isika rehefa manokatra menio dia efa nidina hatrany ambany ny fanaraha-maso; tadidintsika eto izay nataon'ny Firefox ho an'io bara tampony io izay nifindra hatramin'ny farany ambany.
Azonao atao ny mahita azy tsara amin'ny bokotra vaovao ananany nalaina tamin'ny fampiharana fakan-tsary ary tsy iza izany fa ny Quick Share; izay vao omaly Google dia nanomboka nanerantany. Ankehitriny, rehefa misy fanaovan-gazety lava atao amin'ny haantsaran-tsary nalaina dia miseho ny bokotra iray eo ambanin'ny Quick Share izay manamora ny fifandraisan'ny mpampiasa.
Manana ny Rindrambaiko momba ny toetrandro OnePlus izay nohavaozina miaraka amin'ireo fitsipika ireo ao an-tsaina sy miaraka amina interface izay apetraka amin'ny beta.
Ity iray ity andian-baovao ary ho hitantsika amin'ny fampiharana Oxygen OS 11 bebe kokoa Izy ireo dia mamaly, araka ny efa nolazainay, ireo telefaona ireo isaky ny lava elatra ny endrika 18: 9. Ny olana dia tena mipetraka amin'ireo manana tanana kely, ka lasa sarotra kokoa ny misafidy ny farany ambony izay mitifitra izay itifirany.
Na izany aza, fampifanarahana ny interface izay noteren'ny mobiles ho azy ireo ary ahafahantsika mifehy haingana kokoa ny zava-drehetra ary mankafy ny efijery tsara kokoa. ny OnePlus dia honohono fa miasa amin'ny akanjo anaovanao voalohany, ny OnePlus Smartwatch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ka OnePlus dia nanatsara ny OxygenOS 11 ho an'ny fampiasana tanana iray hafa amin'ireo finday
Ny Google Assistant dia efa mifanaraka amin'ny fitaovana maherin'ny 50.000
Google Maps dia manomboka mampiseho jiro fifamoivoizana amin'ny arabe